तरकारी खेतीबाटै बदलिएको कुमालखाडा बासिको दिनचर्या ! – Dullu Khabar
तरकारी खेतीबाटै बदलिएको कुमालखाडा बासिको दिनचर्या !
गरिवी,विपन्नता र पछौटेपन रहेको यहाँका बस्तीका अधिकाँश पुरुषले भारतको बम्बै मनालीलाई कर्म थलो बनाउँथे । एकबर्षको ६ महिना कोही भने चार-पाँच बर्ष भारतमा विताएर जहान परिवारलाई एकसरो कपडा केही छाक गुजाराका लागि धनदलौत लिएर घर फर्किन्थे ।
दैलेखको आठविस नगरपालिका –३ कुमाखाडाका कृषक पोलिहाउसमा भरखरै लगाएको तरकारी । भक्तबहादुर शाही
दैलेख । एक दशक अघि एचआईभी संक्रमितको नामबाट चिनिएको दैलेखको आठविस नगरपालिका –३ कुमालखाडा गाउँका बासिन्दाको दिनचार्य बदलिएको छ ।
कुनै बेला संक्रमितको गाउँ भनेर चिनिएको कुमालखाडा फेरिदै गएको छ । संक्रमितको गाउँ भनेर चिनिएको सोही ठाउँ आजभोली तरकारीको नमुना गाउँ बनेको छ ।
तर, विडम्बना बम्बै गएकाले अधिकाँशले भारतबाट एचआईभी एड्स रोग लिएर आए । घरमा नाबालक छोराछोरीलाई सकि नसकि पालन पोषण गरिरहेकी महिला समेत रोगको सिकार बन्न पुगिन् । श्रीमानले बम्बैबाट ल्याएको एचआईभी एड्सको नासो नै जहान परिवारलाई पासो बन्यो ।
कर्णाली राजमार्ग जोडिएको र कर्णालीको किनारामा रहेको यो गाउँको आजभोली नाम मात्र होइन स्वरुप नै बदलिएको छ । रोग, भोक, गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनले पिल्सिएको यो गाउँको मुहार फेर्ने अभियानको थालनी भएको छ ।
गाउँका अधिकाँश महिला र पुरुषको दिनचार्य तरकारी बारीमै वित्ने गरेको छ । सधै भारतलाई कर्मथलो बनाएका पुरुष समेत मुग्लान जान छोडेर बारीमै मुला,टमाटर,काउली,आलु उत्पादन गरेर आम्दानीले बढाउने गरेका छन् ।
कुमालखाडाका ३० जना किसान तरकारी खेतीमा लागि परेका छन् । पोली हाउस निर्माण गर्ने तरकारीको वेर्ना उमार्ने,वीउविजन लगाउने,स्याहारसुसार गरेर दिन विताउने गरेको कुमालखाडाकी ४५ बर्षिया नानीदेवी शाहीले बताईन ।
उनी भन्दछन,समयमै मलजल राम्रो भयो भने तरकारी बढी फल्छ । तरकारी फलेमात्र आम्दानी हुन्छ । म पनि त्यही गरेकी छु । टमाटर, आलुलगायतका तरकारी गोडमेल र पानीले गर्ने काम दिनहुँ गर्छु ।
सोही गाउँमा डिसीए सहयोग सोसेकद्धारा सञ्चालित साकार परियोजनाले गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउन अभियानमा सहयोग गरेको स्थानीयबासी बताउँछन् । परियोजनाले भकारो सुधार गरी मल मुत्र व्यवस्थापन गर्नको लागि भकारो सुधार कार्यक्रम समेत लागू गरेको छ ।
संस्थाले ३० घरका किसानलाई तरकारीको बीउ, प्रति किसान एक वटा पोली हाउस, सरल थोपा सिंचाई, गार्डेन पाइप, ५० लिटरको प्लाष्टिक ड्रम, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण र खेतीका लागि आवश्यक औजारहरु सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
किसानलाई गहुँको बीउ समेत दिइएको संस्थाले जनाएको छ । झण्डै ८ लाख ८५ हजारको लागतमा यहाँ दुई वटा सिंचाई प्रविधि निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
पाइप लाइन मार्फत प्लाष्टिक पोखरी निर्माण गरी उक्त पोखरीमा पानी जम्मा गरेर तरकारी खेतीका लागि सिंचाई सुविधाबाट तरकारी लगाउने किसानलाई सजिलो भएको भावना खत्रीले बताईन ।
सोही गाउँमा सिंचाई कुलो समेत निर्माण गरिने संस्थाले जनाएको छ । एकिकृत उत्पादन मार्फत गाउँलाई नमूना गाउँ बनाउन लागिएको संस्थाका उप–कार्यकारी निर्देशक बसन्त श्रेष्ठले बताए ।
कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित रहेर व्यवस्थित कृषि तथा पशुपालन तथा सरसफाई युक्त गाउँ निर्माण गरिने श्रेष्ठले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएकाले त्यसलाई सहयोग पु¥याउन परियोजनाले अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएको जानकारी दिए ।
‘तरकारीमा गाईभैंसीको मल प्रयोग हुनेछ ।’ संस्थाले तरकारी व्यवस्थापनदेखी बजारीकरणसम्म किसानलाई सहयोग गर्छ,उनले भने ।
किसानहरुले सरसफाई युक्त कुमालखाडा गाउँ बनाउने तरकारी खेती मात्र नभई भाँडा माझ्ने ठाउँ, भाँडा सुकाउने चाङ निर्माण गर्नेछन् । सिंचाईको समस्या भएको यो गाउँमा सिंचाई व्यवस्थापन गरिने संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापा बताए ।
‘एकिकृत विकास गरेर कुमालखाडा गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने कार्य सुरु गरेका छौं । रारा जाने मुलबाटो यो गाउँ पर्ने हुँदा गाउँलाई तरकारी नमुना गाउँ बनाउनुका साथै गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरि पर्यटन प्रर्वद्धन गरेर स्थानीयबासीको आम्दानी बढाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएका छौं,’ थापाले भने ।
Tags: तरकारी खेतीबाटै......